नेप्से परिसूचक स्थिर रह्यो - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
नेप्से परिसूचक स्थिर रह्यो
जेष्ठ ५, २०७४-सातामा कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक लगभग स्थिरजस्तै बनेको छ । उक्त दिन कारोबार सुरु भएको करिब १ घण्टासम्म सामान्य अवस्थामा चलेको बजार त्यसपछि ओरालो लाग्न थालेको थियो । यो घटाइले करिब एक घण्टामा नेप्सेलाई १० अकं तल झार्‍यो । त्यसपछि केही सम्हालिँदै उकालो लागेको बजार अन्तत: ०.३९ अंकले मात्र घटेर १ हजार ६ सय ४३. ८७ विन्दुमा पुग्यो । अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक ०.०२ प्रतिशतले कम हो । कारोबारमा आएका धेरै समूहहरूको परिसूचक बढे पनि बैंकिङ र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्सेमा सामान्य दबाब परेको हो ।
बिहीबार बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.५३ प्रतिशतले घट्यो । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ०.२५ प्रतिशत ऋणात्मक रह्यो । उक्त दिन बिमा समूहको परिसूचक ०.३३, उत्पादन तथा प्रशोधनको १.५३, होटलको १.५८, जलविद्युत्को १.२२, विकास बैंकको ०.६९ र वित्त कम्पनीको ०. ६७ प्रतिशत बढे । करिब साढे ५ हजार कारोबारबाट १ सय ४६ कम्पनीका १२ लाख ७ हजार ६ सय ९ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती कारोबारबाट ७८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो ।
ब्रोकर कम्पनीको पुँजी १० गुणा बढ्यो ›
चुनावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चर्चामंसिर ७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
संघीय संरचनालाई तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब आवश्यकमंसिर ७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
पूर्वी पहाडको मुद्दा तमोर
पूर्वी पहाडको मुद्दा तमोरमंसिर ७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
पोखराको चुनावी एजेन्डा पर्यटन प्रवद्र्धनमंसिर ७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
टाटाको हेक्जा बिक्री सुरुमंसिर ७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
बजाजको ‘ग्रान्ड एक्सचेन्ज मेला’मंसिर ७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नयाँ राडारको निगरानीमा जहाजमंसिर ६, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
बंगलादेश बैंकको १२ प्रतिशत बोनस
बंगलादेश बैंकको १२ प्रतिशत बोनसमंसिर ६, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
सबै कमोडिटी एक्सचेन्ज नयाँ प्रक्रियाबाटमंसिर ६, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नेप्सेमा सामान्य सुधारमंसिर ६, २०७४पूरा पढ्नुहोस्